Wax ka beddelidda dariiqa loo beddelayo macdanta macmiilka | Martech Zone
Wax ka beddelidda dariiqa loo beddelayo macmiilka macmiilka
Khamiista, Sebtember 4, 2014 Douglas Karr
Ma jiraan wax yar oo ka mid ah shirkadaha u baahan in laga caawiyo beddelidda macaamiisha. Kulligeen aad baan u mashquulsan nahay mar walbana waxaannu ku fiicnayn soo saarista alaabooyin iyo adeegyo waawayn, laakiin inta badan waxaan ku dhacnaa bixinta waddo habsami leh oo horseed u noqota macaamiil Tiknoolajiyada suuqgeynta ayaa siisa aalado kala soocaya farqigaas iyo kobcinta hoggaamiyeyaashaas si hufan.
Infografigani ka yimid Gaaritaanka Deegaanka, waxaad safar ku mari doontaa hogaaminta iibka, oo dhan laga bilaabo bilowgeeda iyada oo rajo laga qabo inaad u noqoto macmiil hal ganacsi oo maxalli ah. Intaad ku sii jirto waxaad la kulmi doontaa macmiil maxalli ah oo raadinaya, xiriir, iyo ugu dambeyn doorta ganacsi maxalli ah. Iyo, waxaad arki doontaa sida loo adeegsado tabaha suuqgeynta mashiinka raadinta wax ku oolka ah, hababka ugu fiican ee websaydhka, iyo maareynta hoggaanka otomatiga ah waxay ka caawisaa ganacsigeenna maxalliga ah inay gaaraan macaamilka maaddaama ay iyada go'aan ka gaareyso.
Qiimaha ayaa si weyn hoos ugu dhacay shirkadaha si ay uga faa'iideystaan ​​inay ahaadaan halka ay macaamiisha ka baarayaan soo iibintooda xigta - in kasta oo mashiinnada raadinta, warbaahinta bulshada, ama moobiilka. Ma jiraan sabab macquul ah oo dambe oo ganacsigu u sameeyo maalgashi oo uu filayo filashada maalgashigaas. Waxay si fudud u helaysaa hay'ad ama lammaane teknolojiyad kaa caawiya intaad socoto.
Tags: advertisingdiintawaddada beddelashadaCustomerLeadhagaajinta barbaarintaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkawadada loo rogoBixi halkii gujippchorumarintaisweydaarsiMashiinka raadintasuuq geynta raadintaayna search engineSEO
Raac Saameeyayaasha Saameeya Baraha Bulshada ee 2014